Muungaab oo la kulmay g/miyaasha - Caasimada Online
Home Warar Muungaab oo la kulmay g/miyaasha
Muungaab oo la kulmay g/miyaasha
Muqdisho (Caasimada Online) Guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Sareeyo guud Gen Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa maanta oo Axad ah kulan la qaatay dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobalka Banaadir.
Kulanka oo ay saxaafadda bannaanka ka joogtay, ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka maamulka gobalka Banaadir Maxamed Yuusuf Cismaan.
Wuxuu sheegay in kulanka looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay adkeynta ammaanka caasimada iyo in la dardar galiyo howlaha nadaafada.
Dhinaca kale, wuxuu sheegay oo kale afhayeenka in guddoomiyaha gobalka Banaadir uu codsaday in dadka loo fududeeyo qaadashada warqadda aqoonsiga, isagoona intaas ku daray in dhawaan degmooyinka gobalka Banaadir laga sameyn doono xarumo laga qaato Warqadda ID Card-ka.
Waa kulankii ugu horreeyay ee guddoomiyaha gobalka Banaadir uu la qaato guddoomiyaasha gobalka Banaadir tan iyo markii xilkaas loo magacaabay 23-kii bishii horre ee Febraayo.